Umgaqo wabucala | Ukucingisisa kwakhona - Amaxabiso
Sisebenzisa i-Ezoic ukubonelela ngeziqu kunye neenkonzo zokuhlalutya kule webhusayithi, njengoko umgaqo-nkqubo wabucala we-Ezoic usebenza kwaye unokujongwa kwakhona cofa apha .
Apha ku-www.shoplunachics.com, imfihlo yabakhenkethi bethu ibaluleke kakhulu kuthi. Olu xwebhu lomgaqo-nkqubo wabucala luchaza iintlobo zolwazi lomntu olufunyenweyo kwaye luqokelelwe ngu-www.shoplunachics.com kunye nendlela esetyenziswa ngayo.
Njengezinye iiWebhusayithi ezininzi, i-www.shoplunachics.com isebenzisa iifayile zelog. Ulwazi ngaphakathi kweefayile zelog lubandakanya iidilesi zomgaqo-nkqubo we-intanethi (i-IP), uhlobo lwesikhangeli, uMboneleli weNkonzo ye-Intanethi (ISP), isitampu somhla / ixesha, ukubhekisa / ukuphuma kwamaphepha, kunye nenani lokucofa ukuhlalutya imeko, ukulawula indawo, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi ujikeleze indawo, kwaye uqokelele ulwazi lwedemokhrasi. Iidilesi ze-IP, kunye nolunye ulwazi olunxibelelene nalo naluphi na ulwazi oluchongiweyo.
Abanye bethu ekuthengisaneni nabo banokusebenzisa iikuki kunye neebhikhoni zewebhu kwindawo yethu. Amaqabane ethu entengiso abandakanya iGoogle Adsense.
Abathengisi beqela lesithathu, kubandakanya uGoogle, basebenzise ii-cookies ukuhambisa iintengiso ngokusekwe kutyelelo lomsebenzisi ngaphambili kwiwebhusayithi yakho.
Ukusetyenziswa kukaGoogle ikuki ye-DoubleClick iyenza ukuba isebenze kunye namaqabane ayo ukuhambisa iintengiso kubasebenzisi bakho ezisekwe kutyelelo lwakho kwiindawo zakho kunye / okanye kwezinye iisayithi kwi-Intanethi.
Abasebenzisi banokukhetha ukusebenzisa icookie ye-DoubleClick kwintengiso esekwe kumdla ngokundwendwela Useto lweeNtengiso .
www.shoplunachics.com ayinakho ukufikelela okanye ukulawula ezi cookies ezisetyenziswa ngabathengisi bomntu wesithathu.
Kuya kufuneka ubonisane nemigaqo-nkqubo yabucala yeeseva zentengiso zomntu wesithathu ngolwazi oluthe kratya malunga nokwenza kwabo kunye nemiyalelo malunga nokuba ungazikhetha njani iinkqubo ezithile. Le migaqo-nkqubo yabucala idweliswe kwimigaqo-nkqubo yabucala ye-Ezoic onokuyijonga cofa apha .
Umgaqo-nkqubo wabucala we-www.shoplunachics.com awusebenzi, kwaye asikwazi ukulawula imisebenzi, yabanye abathengisi okanye iiwebhusayithi.
Ukuba unqwenela ukukhubaza ii-cookies, unokwenza njalo ngokukhetha isikhangeli sakho. Ulwazi oluthe kratya malunga nolawulo lwecookie kunye neebrawuza ezithile zewebhu zingafunyanwa kwiiwebhusayithi ezikhethiweyo.
Senze inqaku ngeqonga likaGoogle lokuHlola elinikezela ngolwazi lweedemographic zabanye abasebenzisi bethu njengobudala, isini, kunye nomdla. Asinakho ukufikelela kulwazi malunga nawuphi na umsebenzisi ngamnye ulwazi kuphela malunga nesiseko seendwendwe ngokubanzi. Ukuba unqwenela ukuphuma ekulandeleleni uGoogle Analytics, ungakwenza oko ngokundwendwela Google iwebhusayithi apha .
Iphepha leendaba le-imeyile Bhalisa
Xa ubhalisela enye yeeleta zeendaba ku-www.shoplunachics.com, idilesi ye-imeyile yakho iya kusingathwa liqabane lethu le-imeyile uPepo Campaigns. Ukufunda ngakumbi malunga nendlela abayigcina ngayo idatha yakho, nceda ujonge umgaqo-nkqubo wabo wabucala ngo cofa apha .
Unokucela ukuba sisuse i-imeyile yakho kuluhlu lwethu lwababhalisile ukuze ungasafumani ii-imeyile ngokunqakraza kwikhonkco elingabhaliswanga elinokufumaneka emazantsi kuyo yonke i-imeyile esiyithumelayo. Ngenye indlela, phendula kwi-imeyile ngegama elithi YIMA kwaye siza kususa i-imeyile kuluhlu lwethu lwababhalisileyo.
Asisoze sayithengisa idatha yakho kumntu wesithathu, kodwa sinelungelo lokukuthumela izibonelelo zentengiso ezivela kubantu besithathu.
I-Facebook, i-Twitter, kunye namanye amaqhosha enethiwekhi yoluntu
Le webhusayithi ibonelela ngamaqhosha okwabelana ngezinye zezona ndawo zidumileyo zonxibelelwano kubandakanya iFacebook, iTwitter, kunye nePinterest. Ukucofa naliphi na kula maqhosha kukuvumela ukuba wabelane ngephepha olindwendwelayo ngoku kwiakhawunti yenethiwekhi yakho. Xa ucofa iqhosha, uya kusiwa kwinethiwekhi yoluntu. Asiqokeleli okanye sisebenzise nayiphi na idatha yobuqu ngala maqhosha.
Abahlobo abahleba ngasemva kwakho
Imibongo yokulahlekelwa ngumntu ngokukhawuleza
ungayixela njani ukuba unemicimbi yokulahla
andikaze ndibenobudlelwane 21
ubuya nini dean ambrose 2018
mangaphi amaxesha edragball akhoyo
Lwenza nini lonke ixesha laseMelika 3